Life Story — Steemit
Spouses and knowledge when choosingareservation that he loved back then measured the right word because you're quite right, I repent ... so tell mosquito mosquito choose married sister ...a3 1/2 with childhood friend / neighbor / Maybe it's the village had better ..1 / childhood friend withayoung The association defines it in his own mind, I'm sure to be minded2/ near houses mean Likewise, whenadepressed person will be open3/ The same is true in the same village have attended attended What do you think I'll be honest Similarly, the most important issue (1) (2) or (3) Numbers Otherwise, choose the level of marriage quiet and easy to love ... I do not know this problem over time will appear sentiment,asister, said two children so awesome ...
Today, the answer's notalot of matches to reap the problem woman to shave off the clause if you are working for your picnic looks like whether you do not like drinking beer all working hours affected ... And next harvest, he does not do, then he What kid could harvest per acre harvest turned up any time .. So easy to call the line to carry grain-saving pick easier harvesting sister said inacarry-saving easier and how lost I was planning sister of whetheraperson is not easy ... There are associate at the head of the family However, negative cutting Who are forced to eat than how mosquitoes would arrange face Think about who to call if planning to accept from now ... This is old sister into their family than now daughter-in-law remarked before last, they will know everything, Carter did not know what their sister If .Aung His sister did not quite go the way I do not know whether suchadrink, I suppose my shop sit just how much money and how much I eatasurprise then if I sat next to insist that I say how much I later realized Q. Oh, I do not ... the family, if not convenient to his brothers and sister, calculated frizzy sister rarely seeathousand people ... It is still difficult without ....
It can choose to shift the marriage ...
အိမ်ထောင်ဘက်ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဗဟုသုတရစေခြင်လို့ရယ် နောက်ပီးချစ်လို့ယူထားတာမဟုတ်လားဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အကိုအတော်လေးနောင်တရမိတယ် စကားကလဲမှန်နေတာကို...ဒါကြောင့်အကို့လိုမဖြစ်စေခြင်လို့ပြောပြခြင်ပါတယ်...ညီမအိမ်ထောင်ဘက်ရွေးတဲ့အခါမှာ ၁/အတူနေငယ်သူငယ်ချင်း ၂/အိမ်နီးနားချင်း ၃/တစ်ရွာထဲသားချင်း တို့ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်..၁/အတူနေငယ်သူငယ်ချင်းဟာငယ်ငယ်ထဲကပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့အတွက်သူ့စိတ်လဲသိကိုယ့်စိတ်လဲသိဆိုတော့စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်ဖို့သေချာပါတယ် ၂/အိမ်နားနီးချင်းဆိုတာလဲထို့အတူပါပဲ တစ်ယောက်စိတ်ဓာတ်တစ်ယောက်သိပီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၃/တစ်ရွာတည်းသားချင်းလဲဒီလိုပါပဲ သူဘာလုပ်တက်တယ်ကိုယ်ဘာလုပ်တက်တယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားရှိတယ် သိပီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒီလိုပါပဲအရေးကြီးဆုံးက(၁)ပေါ့အဆင်မပြေရင်(၂)ဒါမှမဟုတ်(၃)ပေါ့နံပါတ်စဉ်အဆင့်အတိုင်းရွေးချယ်ပါ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် အိမ်ထောင်ရေးသာယာဖို့မလွယ်ကူပါ...ချစ်စခင်စမှာဒီပြသနာတွေမသိရပါဘူး အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ စိတ်ဓာတ်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ညီမလေးပြောခဲ့တယ် သားသမီးနှစ်ယောက်တောင်ရနေပီတဲ့ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ...
ဒီနေ့အကိုတို့စကားများကြပါတယ် သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးပါ အကိုတို့စပါးရိတ်မဲ့ပြသနာပေါ့ အကို့မိန်းမကသူ့အကိုတွေကိုရိတ်စေခြင်တယ် အလုပ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့ သူ့အကိုတွေကအလုပ်လုပ်ပီဆိုရင် ပျော်ပွဲစားထွက်သလားထင်ရတယ်..အရက်ဘီယာအားလုံးပါရတယ် အကိုကအလုပ်လုပ်ရင်းသောက်တာမကြိုက်ဘူး အလုပ်ချိန်ထိခိုက်ပါတယ်...နောက်တခုကစပါးရိတ်သူမရှားပါဘူး အပီးအစီးလုပ်ပေးမဲ့သူရှားတယ် စပါးရိတ်တာကတစ်ဧကဘယ်လောက်ဆိုပီးအပျက်ရိတ်ကြတယ်လေ..ဒီတော့ကောက်လိုင်းသယ် စပါးခြွေတော့လူကခေါ်လို့မလွယ်ဘူး ညီမ အကိုကပြောတယ် ရိတ်တာကလွယ်တယ်သယ်ပီခြွေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးတော့ မင်းရှာလိုက်လေတဲ့ ကဲ လွယ်တာကိုသူစီစဉ်တယ်ခက်တာကျအကိုတဲ့ တရားသလား လူတစ်ယောက် ခ ရတာမလွယ်ဘူးညီမ...မင်းအိမ်ထောင်ဦးစီးပဲတဲ့ အကို့မှာအပေါင်းသင်းတွေရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့အပျက်ရိတ်တဲ့ဟာကျမခိုင်းပဲ နေ့စားကျဘယ်သူလိုက်ခြင်မှာလဲ ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ခေါ်ရမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ..သူစီစဉ်မယ်ဆို အစဆုံးစီစဉ်ပေး အကိုလက်ခံပါတယ် ခုတော့ဟာ...ဒါကအကင်းပဲရှိသေးတယ်ညီမ သူတို့မိသားစုထဲကိုအကိုရောက်စက အကို့ထက်အရင်ရောက်နေတဲ့ချွေးမတွေကပြောကြတယ် နောက်ဆိုသူတို့စိတ်တွေသိရလိမ့်မယ်တဲ့ အဲ့တုန်းကအကိုသဘောမပေါက်ခဲ့ဘူး ကြာလာမှသိရတာပါ ညီမ ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလူချင်းသာမောင်နှမတော်တာ ငွေခြင်းမတော်ကြဘူး နားရှုပ်သွားသလားမသိဘူး ဥပမာ ပွဲလမ်းခရီးအတူသွားတယ်ဆိုပါစို့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထိုင်လိုက်တယ် စားကျသောက်ကျပေါ့ ငွေရှင်းတော့မယ်ဆိုရင် မင်းစားတာကဘယ်လောက်ငါစားတာကဘယ်လောက်နဲ့ အကိုအရမ်းအံ့သြသွားတယ် အကိုလဲရပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းပမယ်ဆိုပီးရှင်းရော နောက်တခါဆိုင်ထိုင်တော့လဲ မင်းဘယ်လောက်ငါဘယ်လောက်လို့ပြောပြန်ရော ကြာတော့သဘောပေါက်သွားတယ် သြော် ငွေချင်းအမျိုးမတော်ပါလားပေါ့...အကိုတို့မိသားစုက အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး အဆင်ပြေတဲ့သူက ရှင်းကြတာပါ ညီအကိုမောင်နှမခြင်းအဲလောက်မတွက်ကျပါဘူး...လူတစ်ထောင်မှာတစ်ယောက်တွေ့ခဲပါတယ် ညီမ အဲဒါအကင်းပဲရှိသေးတယ် အကိုအနေရခက်ခဲပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါရစေ....
မှန်ကန်တဲ့အိမ်ထောင်ဘက်ကို ရွေးချယ်နိူင်ပါစေ ညီမရယ်...